Making of KeyMagic 1.5 | ThantThet
keymagic » Making of KeyMagic 1.5	Making of KeyMagic 1.5
Posted by ttkz on Aug 14, 2011 in keymagic | 38 comments	I was being busy by working onanew version of KeyMagic 1.5 these days and nights ( sleepless nights ). KeyMagic 1.5′s whole GUI is re-written in C#. GUI would be look nice on Vista and later as I used new DWM‘s features, the aero glasses. Look the pic. More important than GUI is 1.5 supports both 32bit and 64bit where 1.4 is not but KeyMagicTS works for both too. And hooking is now Low Level Keyboard hooks so no crash will be occurred even if there is error in KeyMagic input processor. And input processor now works in .NET wrapped libkeymagic which mean more good error handling. Starting from 1.5, I used libkeymagic so we can expect same typing experience with other platforms. If you don’t know yet, libkeymagic is used in Mac, Linux and iOS.
If you look carefully on above pic. You will see keyboard list with FileName, DisplayText, Hotkey, Version, Description columns. When new keyboard layout is installed, DisplayText, Hotkey, Version, Description are grabbed from keyboard layout. And look Version column, you will see many version which means 1.5 continue to supports lower version of keyboard layouts. Anyway, version 1.3 don’t contain such information about Hotkey, Icon. You can also disable keyboard layouts if you don’t want.
And something big, which is missing in previous of KeyMagic, is Soft keyboard/(On-screen keyboard). Soft Keyboard is fully featured, you can resize and drag anywhere you want and yes with an attractive UI with Aero On the pic, It is showing layout for Zawgyi L-Unicode which has switch key. Switch key are showing with Blue color. Look down, there are more colors. Orange when CapsLock is on and Gray when key is down.
Next picture is about menu. That menu is inspired by Mac OS X and seems look nice on windows too. That’s all for now, I just want to show these pretty pics. Actually there are also some big improvements and fixes on input processing library. Will write about those somedays. Hopefully. ထင်တာမြင်တာများ ပြောနိုင်ပါတယ်။ UPDATED: Beta release was uploaded: http://code.google.com/p/keymagic/downloads/detail?name=KeyMagic-1.5-beta.zip
Zawmin says:	Wow!! Nice..
IT-KOKO says:	တော်တော်လေးကိုမိုက်သွားတယ်… စောင့်မျော်နေတယ်နော်..
sarge4u says:	Approximately when do you think v1.5 beta will be downloadable? Looks quiet good, I must agree.
Kyaw Zwa Thant says:	ကြိုက်တယ် … ဘယ်ကနေ download လုပ်ရမှာလဲ…. full version ထွက်ရင် link လေးပေးဦးနော်…..
sarge4u says:	IIRC, someone also did onscreen keyboard for Win fonts for Windows 95awhile back. Having non-standard keyboard was the main detrimental issue for wide adoption. I hope Unicode can fix that problem.
ttkz says:	beta release: http://code.google.com/p/keymagic/downloads/detail?name=KeyMagic-1.5-beta.zip
talachan says:	Bro. I have done for Mon keyboard with keymagic. Can you put Mon on your Keymagic .
ttkz says:	For which font bro, for unicode? I can add if it’s for unicode… can you please send keyboard file to my mail. thantthetkz [at] gmail.com
tala chan says:	thank brothers i sent it to
than Dana says:	ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
koye says:	I was downloaded your keyMagic and thank you so much.
Arkar Shine says:	ကျွန်တော် မြန်စံနဲ့တွဲပါလာတဲ့ ဗားရှင်းကိုသုံးပါတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာ ၃ ကို ဖွင့်/ပိတ်ဖို့ ဖြတ်လမ်း ခလုတ် မပါပါ။ ကျန် ကီးဘုတ်တွေက ဖွင့်ဖို့ ပါပြီး အပိတ်ခလုတ် မပါ။ အဲဒီတော့ မြန်မာနဲ့ အင်္ဂလိပ် ရောရိုက်ရင် မောက်စ်ကိုတွဲသုံးနေရလို့ လုံးဝအဆင်မပြေ။ Hot key tab မှာ စိတ်ကြိုက် Assign လုပ်ခွင့်ပေးရင် ဇော်ဂျီမှာလို အရမ်းအဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျား။
ttkz says:	KeyMagic အကုန်လုံးမှာ Hotkey စိတ်ကြိုက် Assign လုပ်လို့ရပါတယ်။ KeyMagic Tray Icon ကို double-click လုပ်လိုက်ရင်ပွင့်လာတဲ့ Dialog မှာ အကုန် Assign လုပ်လို့ရပါတယ်။
Wai Gyi says:	ကျွန်တော် KeyMagic-1.3.2-Win32-Standalone ဗားရှင်းက Zawgyi L.kmn ဆိုတဲ့ ကီးဘုတ်ကို Add လုပ်ပြီး Hot Key assign လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီအတွက် Hot Key က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မောက်စ်ကိုင်ပြီး ပြောင်းမှရတော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ နောက်ပြီး Hot Key Turn off အတွက် သုံးထားတဲ့ Hot Key ကလည်း မြန်မာ၃ ပြောင်းတဲ့ Hot Key လိုပဲ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ဇော်ဂျီကို facebook တို့ဘာတို့မှာ သုံးနေရဆဲ ဖြစ်လို့ Zawgyi L ကိုလည်း သုံးလို့ရချင်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ဇော်ဂျီအတွက် Hot Key က အဆင်မပြေတာပါပဲ။ Window 7-64 bit အတွက်ကတော့ ဒီကီးဘုတ်က အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ။ ရှာနေတာကြာပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီလေးပါ ရရင် အတော်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ttkz says:	ဘယ်ကီးကို assign လုပ်လဲ ပြောပြပေးပါလား အကို…
Wai Gyee says:	ဆောရီးဗျို့…
ကျနော့်စက်က ကြောင်နေလို့ ဖြစ်နေတာပါ။
ဟော့ကီး ကတော့ ကီးမက်ဂျစ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်းပဲ ပေးတာပါပဲ။
ဇော်ဂျီကို Ctrl+Shift+X ထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီကို ဟော့ကီး ကနေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလို့ မရသေးဘူး။ အရင်ဆုံး စစ်စတမ် ထရေး က အိုက်ကွန်မှာ ဇော်ဂျီကို ကလစ်နှိပ်ပြီး အရင်ရွေးမှ ရတယ်။ ပြီးရင်တော့ Ctrl+Space နှိပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ the remote name could not be resolved: ‘dl.dropbox.com’ ဆိုတဲ့ message ကတော့ တက်တုန်းပဲ။ အိုကေ နှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ ငြိမ်သွားပါတယ်။ ကျနော့်စက်မှာ (7-64) dotNetFx35setup.exe ကိုထည့်လို့မရ တာကြောင့်များလား မသိဘူး။
Thet says:	I have some problem with Key Magic on my Win732bit. Everytime it start, it show KeyMagic is stopped working Message appear. Can you please advice?
Thet says:	Anyway, Key Magic is great and thanks for your great contribution to the community.
ttkz says:	Please open an issue at http://code.google.com/p/keymagic/issues/entry by entering the steps to reproduce the problem. Thank you!
Thet says:	Just created the ticket with screenshot Bro.
ttkz says:	ok. thanks.
m0rRis says:	i using keymagic 1.4 now and i can’t type ဦး in 1.4
ttkz says:	Which layout are you using? Zawgyi-Unicode? Consider updating layout file.
Best option is upgrading to 1.5.
Arkar shine says:	“ရှို့”ကိုရိုက်ရင် အောက်မြစ်က နောက်မှာသီးသန့်မပေါ်ဘဲ တစ်ချောင်းငင်ပေါ် ရောက်နေပါတယ်။ ဖြေရှင်းပေးစေလိုပါတယ်။
ttkz says:	ခုအကိုရိုက်ထားတာတော့ ဒီမှာ ကောင်းကောင်းပေါ်နေပါတယ်။ ဘယ် ကီးဘုတ် ကိုသုံးတယ်ဆိုတာသိမှ ဖြေရှင်းပေးလို့ရပါမယ်။ အကို အခုဒီမှာ ရိုက်ထားတဲ့ “ရှို့” မှာလည်း အမှန်အတိုင်းမပေါ်ဘူးဆိုရင် font ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ သုံးနေတဲ့ဖောင့်ကို upgrade လုပ်ကြည့်ပါ။
Arkar shine says:	“ရို့”ကိုရိုက်ရင်လည်း ထို့အတူပါပဲ။
Soe Thura says:	အကိုရေ KeyMagic 1.4 ကတော့ X32 မှာအဆင်ပြေပေမဲ့ X64 မှာအဆင်မပြေဘူးဗျ။
KeyMagic 1.5.0 ကတော့ တစ်ခါတလေမှာ Photoshop မှာ ဒရပ်ဆွဲလို့မရတာဖြစ်တတ်တယ်နော်
KeyMagic 1.5.1 က the remote name could not be resolved: ‘dl.dropbox.com’ ဆိုပြီး message တက်တက်လာတယ်။ ပြီးတော့ WinKey + D တို့လိုမျိုး WinKey နဲ့တွဲသုံးတာတွေသိမ်မရဘူး အဲဒါကလွဲရင် 1.5.1 မှာ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
Wai Gyee says:	ကျနော်သိတာတော့ ကီးမက်ဂျစ် သုံးနေချိန်မှာ Window shortcut တွေကို သုံးလို့မရပါဘူး။
Turn off Hot key (Ctrl+Space) လုပ်ပြီးမှ Window shortcut တွေကို သုံးလို့ ရတာပါ။
the remote name could not be resolved: ‘dl.dropbox.com’ ကတော့ ကျနော့် စက်မှာလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ttkz says:	ဟုတ်.. အကိုပြောတဲ့ ပြဿနာတွေ တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်..
the remote name could not be resolved: ‘dl.dropbox.com’ က internet မရှိတဲ့အချိန် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက် version မှာ fix လုပ်ပေးပါ့မယ်။
Htut Kyawzwar says:	အစ်ကိုရေ
ကျွန်တော် v 1.4ကို သုံးနေပါတယ်။ v 1.5.1ကို ပြောင်းသုံးချင်ရင် v 1.4ကို အရင် uninstall လုပ်ရမှာလား။
အလိုလို overwrite လုပ်သွားသလား။ သိလိုပါတယ်။
ttkz says:	Uninstall လုပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။
ိိိdrcrazy says:	Window 8 consumer preview မှာ keymagic v1.5.1အင်စတော လုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
Side-by-side configuration is incorrect ဆိုပီး ပေါ်နေတယ်ဗျ… တချက်လောက် စစ်ပေးပါအုံး။
Window 8 CP မှာ ယူနီကုဒ်မြန်မာဖောင့်တော့ ပေါ်တယ်.. လက်ကွက် ရိုက်ဖို. အဆင်မပြေဖြစ်နေလို.ပါ။
ttkz says:	ဟုတ်.. ကျေးဇူးပါ.. စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်..
WINNAING says:	thank you
ရဲလင္းဗိုလ္ says:	Thant Thet Khin Zaw ရေ ကျနော်ခုပြောချင်တာက ခုကျနော်တို့သုံးနေတဲ့ မြန်မာစံ က ရုံးသုံးအနေနဲ့ သုံးနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ မြန်မာစံက Windows system 64 bit မှာ Autocad 2010 တို့ Autocad 2012 တို့ မှာ မြန်မာစံက သုံးမရဘူး ။ အဲ့ဒါလေးကို ရှင်းပြပေးပါဦး။ ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုပါ ပြောပြပေးပါ။ ဒါမှ မဟုတ် ဘာလိုလို့လဲပေါ့။ တကယ်လို့များ သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ၊ နောက်ပြီး ဘယ်ထဲကို ဝင်ပြီး ဘာတွေလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို သေသေချာချာလေး ရှင်းပြပေးပါဦး ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ကို ဝန်ကြီးဌာနက ဝေထားတာက 64 bit အတွက်တို့ 32 bit အတွက်တို့ ဆိုပြီး ခွဲမပေးထားပါဘူး။ အဲ့တော့ နားလည်တာက ဒီ software က windows အားလုံးအတွက် ရတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Excel တို့ word တို့ မှာတော့ သုံးရတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီ Autocad မှာတော့ သုံးမရဘူး ရေးမရဘူး။ ကျန်တဲ့ 32 bit တွေနဲ့ကြတော့ သုံးရတယ်။ သုံးမရတာက 64 bit မှာပဲ Autocad ကိုသုံးမရတာပါ။ ကျနော့် လိပ်စာနဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေရှင်းချက်လေးကို ပြောပြပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ttkz says:	သုံးမရဘူးဆိုတာ လုံးဝရိုက်လို့မရတာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်ကီးမက်ဂျစ် version သုံးလဲ။
တကယ်လို့ ရိုက်လို့ရပြီး မြန်မာစာ ကောင်းကောင်းမပေါ်တာဆိုရင်တော့ AutoCAD က unicode ကို support မလုပ်တာပါ။
Aung Htoo says:	ကျနော်လည်း ယူနီကုဒ်ကို မထောက်ပံ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို သုံးနေပါတယ်။ အဲမှာက ယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်ကို ပြောင်းပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့ Question Mark “????” တွေချည်း ပေါ်တော့တာပဲ။ ကျနော်ရိုက်လိုက်တဲ့စာကို အပြင်မှာ text file နဲ့ရရင်လည်း အဆင်ပြေလို့ Keylogger မျိုးစုံနဲ့လည်း စမ်းသုံးကြည့်ြပီးပါပြီ။ keylogger တွေကလည်း ယူနီကုဒ်ဆိုရင် record မလုပ်နို်င်ပါဘူး။ ကျနော်သိချင်တာက ယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်ကို မချိန်းဘဲနှင့် ဥပမာ− “အိမ်” ဆိုတဲ့စာလုံးကို ရိုက်ပြီးတော့ save လိုက်မယ်။ ပြီးရင် အဲဒီစာလုံး “tdrf” ကို ယူနီကုဒ်နဲ့ “အိမ်” တဲ့စာလုံးရအောင် ပြန်ပြောင်းလို့များ ရနိုင်မလားလို့။ keylogger နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော်လည်း ဘယ်ဆိုဒ်မှာ သွားမေးရမှန်းမသိလို့ပါ။ ဒီမှာက နီးစပ်သလာလို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Htut Kyawzwar says:	ကျွန်တော် မြန်မာ-၃ ကို ကြိုက်ပါတယ်။ လက်ကွက်ကတော့ မြန်စံကို သုံးပါတယ်။ ပြဿနာက မောက်ချ(ါ) ကို ရိုက်တဲ့အခါ နောက်မှာ အလိုအလျောက် space ခြားသွားလေ့ရှိတာပါ။ အဓိက(ပါက) လို့ ရိုက်ရင်ဖြစ်တာပါ။ ခက်တတာက အမြဲတမ်းတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ တခါတလေ ရိုက်မရလို့ အပေါ်က ကောင်းနေတဲ့ဟာကို ကော်ပီကူးတာ ပေ့စ်လည်းလုပ်ရော ချဲသွားတာကြုံဖူးပါတယ်။ Keyboard ကြောင့်လား? fontကြောင့်လား?